Kororso Aqoontaada Qeebta (6 )
Subject: Kororso Aqoontaada Qeebta (6 ) Tue Jan 18, 2011 6:17 pm
dhamaan walaalaaha waan ka raali galinayaaa oo la socday barnaamijaani suaalaha iyo jawaabaha oo taxanaaha noo ahaayay wax yar waxaan ku jiray imtixaanaad hada laakin way ii dhamaadeen waa mahad alaaah marka qeebtii lexaad ku soo dhawaada
1-Su'aal, Sheeg kumuu ahaa Gabyaagii Rasuulka (NNKH).
1-Jawab, Gabyaagii Rasuulka (NNKH) wuxu ahaa Xasaan Binu Thaabit.
2-Su'aal, Sheeg imisa sano ayey dacwadu (Fidinta diinta) Qarsoodi ehayd.
3-Su'aal, Sheeg kuwii Islaamka ugu horeeyey ee muhaajiriin ah ?
Waxay kala ahaayeen, 1- Hooyo Khadiijo Bintu Khuweylad rc, 2- Cali Bin
Abii Daalib rc, 3-Abuu-bakar rc, 4-Sayid Binu Thaabit rc, 5- Cusmaan Bin
Cafaan rc, 6-Subeyr Bin Cawaam rc, 7- Cabdi Raxmaan Bin Cowf rc, 8-
Sacad Bin Abii waqaas rc, 9-Dalxa Bin Cubeydillah rc,
4-Su'aal, Sheeg Qofkii ugu horeeyey ee islaanimo ku shahiida?
5-Su'aal, Sheeg Gabadhii ugu horeesay ee Islaanimo ku Shahiida?
Si'ay Boqorka hadiyad ugu geeyaan, Muhaajiriintana Gacantooda loo-soo geliyo, Hadaba sheeg labadaas Nin magacyadooda?
7-Su'aal, Sheeg goormuu soo Islaamay Xamza Bin cabdi mudalib?
Xamza Bin Cabdi mudalib wuxu soo islaamay sanadkii lixaad ee
Nabinimada. Nabiga (NNKH) oo 6 sano nebi ah ayuu soo islaamay xamza.
Sidoo kale sanadkaan waxaa soo islaamay Cumar bin Khadaab.
8-Su'aal, Sheeg Xamza RC iyo Cumar bin khadaab imisa maalmood ayey kala danbeeyeen soo galitaanka Diinta Islaamka .
9-Su'aal, Sheeg goormay dhacday hijradii uu Rasuulka (NNKH) ka soo Hijrooday Maka una soo Hijrooday Madiina?
10-Su'aal, Sheeg markii Nebiga (NNKH) uu madiina u hijroonaayey kumuu ahaa asxaabigii la socday?
11-Su'aal, Sheeg ciidaanka caalamka ugu tirada badan ?
12-Su'aal, Sheeg ciidaanka caalamka ugu awooda badan?
13-Su'aal, Sheeg warshada sonkor isnaay oo ku taalo magaalada jowhar sanadkii la-aas-aasay?
14- Su'aal, Sheeg magaalada kaliya ee Soomaaliya bariiska ka baxo?
15-Su'aal, Sheeg bariiska ka baxa magaalada Jowhar magaca loo-yaqaano?
16-Su'aal, Sheeg abwaanka weyn ee soomaaliyadeed Maxamed Ibraahim Warsame (Hadraawi) sanadkii uu dhashay?
18-Su'aal, Sheeg shimbirka shimbiraha ugu xoogga badan?
19-Su'aal, Sheeg Libaaxa yar ee ilmaha ah magaca loo-yaqaan?
laco QEYBTII 7AAD.
Subject: Re: Kororso Aqoontaada Qeebta (6 ) Sun Feb 06, 2011 12:35 pm
Subject: Re: Kororso Aqoontaada Qeebta (6 ) Sun Feb 20, 2011 9:30 pm
walaal adaa mudan
Subject: Re: Kororso Aqoontaada Qeebta (6 )